MBP: Mpamatsy bilaogy mikraoba sy Protocol | Martech Zone
MBP: Mpamatsy bilaogy Micro-Micro sy Protocol
Zoma, Jona 13, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mety efa namaky momba ny tiff ry zareo aorian'izay Robert Scoble sy Twitter. Nihaona tamin'ny Twitter tokoa i Scoble ary namaha ny raharaha. Ny olona sasany dia miresaka momba ny maodely fandraharahana miaraka amin'ireo tolotra bilaogy bitika kely ireo mpampiasa malaza mandoa ny serivisy.
Tena te-hanolotra tolo-kevitra tsara kokoa aho ary izany dia ho an'ireo sehatra fanaovana bilaogy micro-net (FriendFeed, Tumblr, Jaiku, Twitter, Pownce, Seesmic, Brightkite, Plurk, qik, sns.) hanapahana hevitra momba ny Micro-Blogging Protocol. Ireo serivisy rehetra ireo dia mety ho lasa Mpamatsy bilaogy Micro-Blogging.
Ny finday, ny horonan-tsary, ny feony, ny rohy, ny miraiki-po, ny sary ary ny hafatra dia mety ho tafiditra ao anaty protokol iray tokana sy madio. Ny fahaizana 'manaraka' dia azo ampiasaina amin'ny sehatra rehetra. Ny sehatra tsirairay dia mety hiavaka amin'ny iray hafa amin'ny fitaovan'ny mpampiasa sy ny interface, fa ny entana sy ny lazan'ny sasany amin'ny hafa kosa dia mety manomboka miparitaka. Tsy ny mpanome tolotra rehetra akory no mila manohana ny haino aman-jery samihafa. Izany dia hanome fotoana ambony kokoa ary afaka misintona ny rindranasan'ny mpanjifa tiany indrindra ny mpampiasa.
Tsy fomba fanaovan-baovao io - fa hoatra ny nataon'ny mpamatsy tolotra Internet tamin'ny mailaka. Azoko atao ny mampiasa izay mpanjifa tadiaviko ary mifanerasera amin'ny olona rehetra ao amin'ny lisitry ny fifandraisana amiko.
Ka eo no anananao izany - fotoana ho an'ny Micro-Blogging Protocol eo amin'ny sehatry ny indostria! Ary andao hiantso ny mpamatsy Micro-Blogging Providers. Andao hanamora izany ho an'ny mpanjifa!
Aza adino an-tserasera amin'ny marketing ivelany!
Fifamoivoizana kalitao tsara amin'ny vidin'ny akanjo
13 Jiona 2008 à 11:59
XMPP mety tsara.
Jun 13, 2008 ao amin'ny 2: 45 PM
Tiavo ity hevitra ity, manontany tena aho raha hisy izany na tsia?
Jun 13, 2008 ao amin'ny 6: 37 PM
Ny bilaogy bitika dia tokony ho serivisy ampifandraisina izay ahafahan'ny mpampiasa mampiasa azy io ho fandefasana hafatra an-tsoratra (hanavaozana ny namana rehetra), bar sata amin'ny tambajotra sosialy (toy ny fiasan'ny satan'ny FaceBook), ary na ny sonia mailaka aza.
16 Jiona 2008 à 1:46
Toa hevitra tsara izany, afa-tsy ny olona iray farafahakeliny ao anatin'ireo orinasa maromaro ireo no tsy maintsy handray ny fitarihana mba hanatanterahana izany. Mety ho lasa miziriziry aho, saingy efa nahita zavatra mifandraika amin'izany aho izay mety hitranga fa tsy izany ka tsy hitako izay hitranga, farafaharatsiny raha tsy misy behemoth toa an'i Google mametraka ny protocol ary miteny hoe "ny rehetra dia manaraka izany, na raha tsy izany.” Miala tsiny fa ratsy, fa indray mandeha kaikitra indroa saro-kenatra.
BTW, tsy azoko antoka raha nahatsikaritra ianao fa niova aho tamin'ny farany ny blaogiko ho an'ny WordPress taorian'ny fiatoana efa ho herintaona. Izaho dia miandry noho ny fotoana (sy ny antony manosika) mba hiova farany amin'ny rindrambaiko taloha izay nanjary olana bebe kokoa noho ny vidiny. Ankehitriny aho dia afaka manao mihoatra noho ny fanehoan-kevitra ao amin'ny blôginao sy ny hafa; Tena afaka manomboka mibilaogy indray aho!
FYI, ny anao dia iray monja amin'ireo bilaogy telo (3) voatanisako ho mazoto manaraka amin'izao fotoana izao. Heveriko fa mety tsy maintsy manampy sokajy blogroll hafa amin'ny “Bilaogy ho arahiko raha mba nanana fotoana aho!” ho an'ireo bilaogy lehibe hafa rehetra any. '-)
16 Jiona 2008 à 8:42
Raha ny marina, tsy dia namaky bilaogy loatra aho (tiako) araka ny tokony ho izy. Indraindray ny asa dia manelingelina ;).
Mankasitraka ny fanohanana aho ary tongasoa eto amin'ny tontolon'ny bilaogy, Mike!
Jun 16, 2008 ao amin'ny 4: 13 PM
Raha ny marina dia tsy hitako izay ananan'ny olona fotoana hamakiana bilaogy maro. Rehefa mamela ny tenako handeha amin'ny fotoana tsy mahavita na inona na inona aho dia malahelo be ny tenako amin'ny fanaovana izany. Dia raha toa aho ka mamela ny tenako hiditra amin'ny “resadresaka” (vakio ny “adihevitra”) dia izay no tena manjary manjavozavo. Tsy haiko hoe ahoana no hitan'ny olona miasa be dia be mba hahitany fotoana hanaovana izany.
Saingy ny iray amin'ireo antony hanohizako mamaky ny anao dia ny hoe, ho an'ireo lohahevitra mahaliana ahy, ny anao dia ambony lavitra amin'ny "signal" noho ny tahan'ny "noise" noho ny ankamaroan'ny bilaogy. Misaotra.